प्रधानमन्त्रीलाई खुला–पत्र « Loktantrapost
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार २१:२१
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु, सङ्ग्रामी अभिवादन एवम् हार्दिक नमस्कार !
राजनीतिक जीवनका अनेकौं त्रासपूर्ण ,भयावह, पीडादायी आरोह अवरोह पार गर्दै मृत्युलाई समेत पटकपटक आफ्नो कब्जामा राख्न सफल तपाईभित्र मानव जातिकै अदम्य साहस देख्न पाइयो । तपाईको यो साहसलाई उच्च सम्मान गर्दै तपाईको सु–स्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु ।
म एउटा सामान्य किसानको छोरा हुँ र आजसम्म म हलोको सियो मै आफू र आफ्नो परिवारको गुजारा चलाइरहेको छु । मलाई कति पनि आफुसँग आत्मग्लानी र पश्चाताप छैन आफ्नो पेशा प्रति । प्रकृति र संस्कृति , पर्यटनको सम्पत्ति भन्ने नारा बोकेर हामी गाउँमा बसेरै देशलाई भरपूर टेवा दिइरहेका छौ । चाहे मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन होस्, ग्रामीण पर्यटन होस् या पर्या पर्यटन होस् । म बुझ्ने भएदेखि विद्यालय जीवनदेखि नै जुनबेला भूमिगत अवस्था थियो उबेलादेखि नै म कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्दै आज एउटा सामान्य कार्यकर्ताको रूपमा झापाको मेचीनगरमा क्रियाशील छु ।
यो अरु पार्टीले खिसी गर्ने विषय पनि होइन । हामीले आज यो दिन ल्याउन धेरै चोटी विभिन्न खाले आन्दोलनमा सहभागी भयौं, आफ्नो सरकार बनाउनको लागि जनतालाई ढाट्न बाध्य भयौं । जनताले चाहेको अन्तिम सरकार पनि लाग्छ यहि हो । तपाईको हिजोको जेल जीवन, तपाईले सङ्गठन निर्माणका लागि गर्नु भएको त्याग, राष्ट्रवादी अडान र पटकपटक ज्यानको बाजी थापेर मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी मृत्युलाई जितेर यो देशको सरकार प्रमुख चलाइरहने क्षमता चानचुने होइन ।
बेलाबेला यतिखेर मलाई आफैभित्र मनोसम्बाद जागृत हुन्छ कि जसले तपाईलाई मिर्गौला दान दिनु भयो त्यो तपाईको स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन । तपाईं जस्तो साहसिलो जनभावना बुझेको प्रखर र राजनीतिक रुपले तिखारिएको राजनेता यो समाज र देशलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ र त्यसमा टेवा पुग्ने विश्वास र भरोसाले प्रदान गरिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जसले यो साहस गरेर आफ्नो जीवनलाई प्रवाह नगरी देश र जनताको हितमा मिर्गौला दान गर्नु भयो उहाँप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु ।
केही सरकारमा बसेर हालिमुहाली गर्नेहरु सरकार बाहिर बस्दाको कुण्ठाले मडारिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौं त्यो स्वाभाविक पनि हो । हाम्रो गाउँघरमा सामान्य उपभोक्ता समिति पोहोर बसेको मान्छे यो पाली बस्न पाएन भने त कत्रो रडाको हुन्छ झन् यो त राष्ट्र हाँक्ने विषय हो ।
मलाई मेरो एकजना गुरुले सानोमा भन्नु भएको थियो यदि कसैले क्यारेमबोर्ड खेल्दा स्टाइगरले बोर्डमा तानिएको धर्का मिचेर हान्छ भने सम्झनु, त्यसले छिमेकीको जग्गा पनि मिच्ने छ, यो मानिसको चरित्र थाहा पाउने एउटा सूत्र हो । त्यसैले हामीले तपाईंसँग ठूलो आस भरोसा राखेका छौं तर सोचे जस्तो नहुनु पछाडिको मुख्य कारण के हो ? टीमका मन्त्रीहरुको लालचिपन, नव धनाढ्य बन्ने सपना, पार्टीभित्र एकता र विश्वास हुन नसक्नु, नविनतम् सोच भएका कार्यकर्तालाई अवसर नदिनु, आफ्नो सामिप्यता जोडिएकोलाई बढी बिश्वास गर्नु, दूरदर्शिता बोकेका सल्लाहकार नहुनु आदि इत्यादि हुनसक्छ । बिपक्षीहरुले यो बेला तीललाई पहाड बनाउनु स्वाभाविक हो ।
बुढापाकाको एउटा उखान छ दुःखमा न आत्तिनु सुखमा न मात्तिनु । यो बेला सरकार मातिएको र जनता आतिएको अवस्था देखिरहेको छु । यस्तो विपतको बेलालाई अवसरको रुपमा रुपान्तरित गरेर जनताको मन जित्न सके नेपाली जनताको जन जिब्रो र मानसपटलमा सदैव यो सरकार र पार्टी जीवन्त रहने विश्वास निवेदन गर्दछु ।
अहोरात्र घाम पानी र भोक तिर्खा नभनी देश र जनताको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीहरु बाहेक अन्य सबै सरकारी कर्मचारीको केही प्रतिशत तलब कोराना राहत कोषमा जम्मा गर्न जरुरी ठान्दछु । यस बाहेक ठूला उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार र विशेष जनप्रतिनिधिहरुबाट कम्तिमा तीन महिनासम्मको सुविधा कटौती गर्दा सबै भन्दा जनपक्षीय हुने हाम्रो ठम्याई छ । त्यस पश्चात् बित्तीय संस्थाहरुसँग निर्देशन जारी गरेर सहयोग लिन सकिन्छ ।
यो बेला मुखमा पानी हालेर हातमा र मस्तिष्कमा ठेला उठ्ने गरी जनहितमा काम गर्ने बेला हो । तपाईको नेतृत्वदायी भूमिका देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय रहेमा मात्र कालान्तरसम्म तपाईको स्मरण जनताले गर्नेछन् र तपाईले अध्यक्ष गरिरहनु भएको पार्टी र हामीले हलो जोतेर जनताको लागि गरेको समर्पणको मूल्याङ्कन हुनेछ । एउटा असल नेतृत्वले समय सापेक्षित निर्णय गर्न सकिएन भने दशलाख कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरा इतिहासको कथामा परिणत हुन सक्छ ।
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको जनताको नाममा सम्बोधन हुँदा देश र जनताले सोचे जस्तो न्याय पाउन् । जुन सम्बोधनमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री देशमा भित्रिसकेको सुन्न पाइयोस् । कामचोर र जनताप्रति साँच्ची कै खेलवाड गर्ने र भ्रष्ट चरित्रका मन्त्री, सल्लाहकारलाई तपाईबाट जनताको मन जित्ने गरी कार्वाही होस् । कानुन र अख्तियार स्वतन्त्र छ भन्ने बिश्वास जनताले बुझ्न सकुन् । सम्बोधनको लागि समय भन्दा पनि समयको लागि सम्बोधन हुन सकोस् । फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युमा सु–स्वास्थ्य, दीर्घायु एवम् देश र जनताको लागि ठोस कदम चाल्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना ।
तपाईको सदैव भलो चिताउने,
अर्जुन कार्की, मेचीनगर (बाहुनडाँगी)